लकडाउनकै अवधिमा स्वास्थ्य समस्या आए कहाँ सम्पर्क गर्ने?
नेपाल लाइभ मंगलबार, चैत ११, २०७६, ०९:०१
काठमाडौं– मंगलबारदेखि सुरु भएको लकडाउनको अवधि चैत १८ सम्म जारी रहनेछ। यो अवधिमा सवैलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोकिएको छ। घरमै बसिरहेको अवस्थामा व्यक्तिलाई ज्वरोको लक्षण वा अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिए के गर्ने? आवश्यक परामर्शका लागि सम्पर्क नम्बरहरु उपलब्ध गराइएको छ। सरकार तथा चिकित्सकहरुले सर्वसाधारणको सुविधाको लागि सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएका हुन्।
व्यक्तिगत रुपमा पनि विभिन्न चिकित्सकहरुले आफूसँग सल्लाह लिन आग्रह गरिरहेका छन्। कोरोनाका सम्भावित लक्षण देखिए नजिकको अस्पताल वा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पुग्नुहोला।